अब माओवादी पार्टीको काम छैन, एमालेमा गए हुन्छ : प्रचण्ड — Imandarmedia.com
१एक्लियो अमेरिका, चीन पनि खम्बाझै उभियो रुसकै समर्थनमा
२एमालेका चर्चित नेताहरु सामूहिक राजीनामा दिदै, को हुन् उनि ?
३ओलीलाई देउवाले पठाए गठबन्धन तोड्न तयार रहेको प्रस्ताव
४मदिरा पिएर उपद्रो मच्चाउने एमालेका चर्चित नेता पक्राउ
५ओमिक्रोन संक्रमण भएपछि शरीरमा के हुन्छ ? अनिवार्य थाहा पाउनुहोस
६चीनिया सेनाको नियन्त्रणमा रहेका भारतीय युवक रिहा
७राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको पद धरापमा
८राप्रपाको ‘गाई’ एमालेको ‘सूर्य’ चिन्ह खारेज हुने भएपछि ओली र राजेन्द्र तनावमा
९युक्रेनले ८ हजार अमेरिकी सेना मैदानमा उतार्दै, अब के गर्ला रुस ?
१०सापकोटाले ओलीसहित एमालेका ९१ सांसदलाई निष्कासन गर्न लागेका हुन् ? एमालेमा खैलाबैला
११यी हुन् गुरु बराललाई हराउने एमाले सांसद, यस्तो थियो अन्तरघातको डिजाइन्
१२रहेनन बाबुराम भट्टराई, यस्तो अवस्थामा भेटियो शव
काठमाडौ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकलम दाहाल प्रचण्डले फेरी पनि माओवादी केन्द्र विगठन गर्ने बताएका छन्। उनले नेताहरु पद, प्रतिष्ठा र पैसाको निम्ति लडिरहने हो भने माओवादी पार्टी विघटन गरिदिए हुने बताएका हुन् ।
उनले यसबारे गम्भीर भएर सोच्न नेता कार्यकर्ताहरुलाई आग्रह पनि गरे । जनयुद्धमा सेनाको आक्रमणबाट मारिएका सुरेश वाग्ले बासु र भिमसेन पोखरेलको २२ औं स्मृति दिवसको अवसरमा बुधबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले माओवादी प्रतिक्रान्तिको सेवा गर्ने ठाउँमा पुग्ने हो कि भन्ने खतरा देखिएको बताए ।
आफूले यस्तो कुरा गरेर निराशा बाँड्न नखोजेको प्रष्टीकरण दिंदै प्रचण्डले भने, ‘हिजो त्यत्रा-त्यत्रा सहिदहरु, त्यत्रो बलिदान, त्यत्रो त्याग, समाज रुपान्तरण, क्रान्तिको निम्ति सम्पूर्ण समर्पण गरेर हिंड्ने पार्टी आज एमालेजस्तै हुने हो भने त यो पार्टीको औचित्य नै के रह्यो र । बरु योभन्दा राम्रो त यस्तो पार्टीलाई विघटन गरिदिएहुन्छ ।
प्रचण्डले भने, ‘पद, पैसा, प्रतिष्ठा, गुट, अराजकतालाई नै प्रश्रय दिने र एमालेजस्तै हुने हो भने, हामी मार्क्सका चेला हौं भने त बरु यसलाई विघटन गरिदिनु इमान्दारी हुने भयो के । हामी क्रान्ति गर्छौं भन्ने, गर्ने चाहिं प्रतिक्रान्ति भएपछि त धोका हो नि जनतालाई । त्यो धोका नदिने हुनका लागि बरु बिघटन गर्ने भन्ने छलफल चल्न खोज्छ आज ।’
उनले आफूहरू नसच्चिए माओवादी लोगोमा मात्र सीमित हुने खतरा औंल्याए । ‘पदको निम्ति, पैसाको निम्ति, प्रतिष्ठाको निम्ति, गुट बलियो बनाउनको निम्ति मरिहत्ते हाल्ने भनेपछि त हाम्रो पनि विस्तारै माओवादी भन्ने लोगो होला जस्तो के, चुरे भन्याजस्तो ।
थाहै नपाइकन हाम्रो पार्टी क्रान्तिको निम्ति आवश्यक औजार होइन, प्रतिक्रान्तिलाई नै घुमाइफिराइ सेवा गर्ने ठाउँमा पुग्ने हो कि !
यो खतरा बडो गम्भीर रुपले देखिएकै छ ।’ ‘त्यसो भएको हुनाले हामीले आजभोलि सोच्न खोजेको, तपाईंहरुले पनि सोच्नु होला । सबै कमरेडहरुले सोच्नैपर्छ । हामी पनि त्यस्तै हुने हो भने यो पार्टी किन चाहियो भन्ने बहस उठेको छ,’ उनले भने ।
मार्क्स, ऐंगेल्सले पनि आफैंले बनाएको कम्युनिष्ट इन्टरनेशनल गलत भयो भन्ने निष्कर्षमा पुगेको उदाहरण दिंदै प्रचण्डले भने, ‘बरु चाहिएन नि । जसलाई त्यस्तै गर्नु छ एमालेमै गए भयो नि । जानु भयो नि त हाम्रा केही साथीहरु ।
त्यसै गर्न मन लागे त गए भयो नि हामी पनि । एमालेमै जाने, एमाले जस्तै हुने, गुट बनाउने, पैसा कमाउने, पद प्राप्त गर्ने, दलालहरुसँग साँठगाँठ गर्ने, तिनीहरुको स्वार्थ पूरा गर्दिने हो भने त एमाले हुन राम्रो नि ।’
उनले यो मामिलामा एमाले र कांग्रेसजस्तो गर्न माओवादीले नसक्ने बताए । प्रचण्डले भने, ‘एमालेमा सबै खालको मिलेको छ । तिनीहरुको नेटवर्क छ, सेटिङ छ । हाम्रो त सेट पनि छैन । केही पनि नजान्ने भइयो । त्यसकारण हामी पछि पर्ने भइयो । हामी सक्दैनौं उनीहरुसँग कम्पिट गर्न ।
एमाले र कांग्रेससँग, त्यही बाटोमा, त्यही लाइनमा, त्यही चरित्र, त्यही विशेषतामा हामी धेरै साना पर्छौं, हामी धेरै कमजोर पर्छौं ।’ उनले माओवादीले गर्न सक्ने भनेको परिवर्तन र रुपान्तरणका लागि क्रान्ति मात्र भएको उनले बताए । उनले माओवादीको रुपान्तरण सामान्य बलले नहुने पनि बताए ।‘नयाँ समाज निर्माण गन सक्ने, हाम्रो विशेषता त त्यो हो ।
त्यो गर्न नसक्ने हो भने यसको औचित्य नै के रहन्छ भन्ने प्रश्न कमरेडहरुले विचार गर्नुहोला,’ प्रचण्डले भने, ‘नकारात्मक ढंगले भनेको चाहिं होइन। हाम्रो रुपान्तरण सामान्य बलले नहुने भयो।
बल अलि धेरै गर्नुपर्ने भयो भन्न खोजेको हो सारमा। प्रतिगमन हुन लाग्यो भने तुरुन्तै आन्दोलन गर्ने र नयाँ खालको जनयुद्ध लड्न तयार हुने माओवादी कार्यकर्ताको विशेषता भएको उनको भनाइ छ । ‘
हामी बिग्रेका छौं तर पनि त्यो क्रान्ति मोह, परिवर्तन, जनता र राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारीवोध मनबाट गएको चाहिं छैन । पार्टीले, लिडरसिपले यदि परिवर्तनका लागि आह्वान गर्यो भने जर्याकजुरुक उठेर फेरि प्रतिक्रियावादीहरुको सातोपुत्लो खान सक्ने ताकत यही पार्टीसँग छ, यो हामी सबैका निम्ति उज्यालो भविष्यको शुभसंकेत हो,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्री देउवालाई माकेका अध्यक्षले राखे यस्तो प्रस्ताव, ७० करोडवाला गोकुल ठूलो तनावमा ! नेपाली राजनीति ब्याक टु ब्याक तातिरहेको छ । दशैंको माहोल सेलाएपनि राजनीतिक माहोल सेलाएको छैन्।
नेपालीहरुको महान चाड दसैं सकिएसँगै राजनीतिक घटनाक्रम विकास हुन थालेका छन्। बडा दसैंको अन्तिम दिन बुधबार साँझ सत्ता गठबन्धनका नेताहरुबीच छलफल भएको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालबीच छलफल भएको थियो।
उक्त छलफल मुलुकभर आएको बाढी पहिरोले भएको जनधनको क्षति भन्दा बढी राजनीतिक विषयमा केन्द्रित भएको थियो। स्रोतका अनुसार उक्त छलफलमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ओली सरकारले संसदीय प्रक्रिया पूरा नगरी गरेका संवैधानिक नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।
‘प्रधानमन्त्री देउवालाई ओली सरकारले संसदीय प्रक्रिया पूरा नगरी गरेका संवैधानिक नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव प्रचण्डजीले गर्नु भएको थियो,’ स्रोतले डिसी नेपालसँग भन्यो, ‘तर प्रधानमन्त्रीजीले अहिले संवैधानिक नियुक्ती खारेज गरेपनि अदालतले त्यसलाई उल्ट्याउनसक्नेतर्फ सचेत गराउनु भयो।’
तर प्रचण्डले अदालतलाई कन्भिन्स गर्ने जिम्मा आफ्नो हुने भन्दै अख्तियारलगायतका संवैधानिक निकायमा ओली सरकारले गरेका नियुक्ती खारेज गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए। प्रचण्डको प्रस्तावपछि ओलीसरकारका पालामा बाहिरिएका पूर्वमन्त्री गोकुल बास्कोटाको ७० करोड काण्ड लगायत काण्ड गर्नेहरु झस्किएका छन् ।
तीन दलका नेताको छलफलपछि प्रचण्डले सिधै बालुवाटारमै रहेको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरलाई भेट्न एक्लै पुगेका थिए। सुरक्षा स्रोतका अनुसार तीन दलको बैठक सकिए लगत्तै प्रधानन्यायाधीशको निवास पुगेका प्रचण्ड करिव २५ मिनेट पनि बाहिरिएका थिए।
प्रधानन्यायाधीश र प्रचण्डबीचको गोप्य भेटमा के विषयमा छलफल भयो भन्ने विषय सार्वजनिक भएको छैन। तीन दलका नेताको छलफलमा अदालतलाई आफूले कन्भिन्स गर्ने बताएका प्रचण्ड बैठक लगत्तै प्रधानन्यायाधीशको निसावमा छिर्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ।
प्रचण्डका प्रेस सहयोगी विष्णु सापकोटा ‘जुगल’ ले तीन दलका शीर्ष नेताबीच मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा छलफल भएपनि प्रधानन्यायीशलाई भेटेको कुरामा सत्यता नभएको बताए।
‘तीन दलका शीर्ष नेताहरु मुलुकको राजनीतिक अवस्था र मुलुकभर आएको वाढी बहिरोलगायतका विषयमा छलफल भएको हो,’ सापकोटाले भने, ‘तर अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानन्यायाधीशको निवासमा छिरेको भन्ने कुरा प्रोपोगाण्डा मात्रै हो।
एक्लियो अमेरिका, चीन पनि खम्बाझै उभियो रुसकै समर्थनमा